Hydra 4 dia manodina sary ho an'ny endrika mazava kokoa sy fiaviana maranitra. | Avy amin'ny mac aho
Hydra 4 dia manome mazava kokoa ny sarinao amin'ny Mac
Javier Porcar | | Mac App Store, macOS Sierra, OS X El Capitan
Efa nahita sary tianao ve ianao izay nivoaka maizina loatra sa maivana loatra ny any aoriana ka manenina ianao? Manana tsara Hydra 4 dia afaka manome anao io "hazavana" io izay tadiavinao fatratra tamin'io sary io amin'ny fanontaniana
Hydra 4 mamela anao hamorona sary miaraka amin'ny Dynamic Range (HDR) malalaka. Manana an'io fiasa io amin'ny iPhones izahay. Raha ny tena izy, ny mpikirakira sary iPhone dia mamela antsika hahazo sary voaloa amin'ny hazavana, izany hoe, ny sary rehetra dia manana hazavana antonony ary ity sary ity no akaiky indrindra izay hitan'ny masontsika. Fa ny fakantsary hafa, na ny DSLR aza dia tsy mahavita azy satria mety mitady effets hafa. Amin'ity tranga ity Hidra 4 dia ho be fanampiana.
Noho izany, Hydra 4 dia hanambatra sary marobe hahazoana sary voajanahary kokoa. Hydra 4 tsy mijanona eo. Amin'ny lafiny iray, mamela antsika hanatanteraka ny fanitsiana mahazatra amin'ny sary, fampifanoherana, fampisehoana, sns, fa koa sivana, tena azo ampiharina mba tsy hanerena anao hanova fampiharana hahavita ny fanovana. Mandritra izany fotoana izany dia araraoty ireo fiasa vaovao rehetra entin'ny Mac OS X:
Fanatsarana ho an'ny Metal
Fifanarahana mpandika teny.
Fanitsiana sary mandeha ho azy.
Previo mampitaha ny sary tany am-boalohany sy ny valiny farany.
Fanafarana sary ao anaty endrika isan-karazany: JPEG, RAW, HDR, EXR.
dikan- (fanodinana sary) haingana be.
Fampidirina miaraka amin'ny Apple Photos App. Raha mampiasa ny Apple application dia tsy mila manondrana sary ianao ary manangona fotoana be dia be
Azo alaina ny fampiharana Mac OS X Captain ary vonona ho MacOS Sierra, porofon'ny fandraisan'anjaran'ny mpamorona amin'ny fampiharana. Hita ao amin'ny Apple Store na ao amin'ny tranokala ofisialy amin'ny vidiny € 59,99. Saingy, amin'izao fotoana izao ny rindrambaiko dia azo vidiana amin'ny fihenam-bidy 25% amin'ny vidiny € 44,99
Raha manana ny kinova Hydra: Hydra 2 na Hydra 3 teo aloha ianao, dia mahatratra 4 € ny fanavaozana ny kinova 29,99. Na dia nividy azy tao amin'ny tranonkala ofisialy taorian'ny 1 Jolay aza ianao, dia afaka mahazo ny kinova 4 maimaim-poana sy ara-dalàna atolory ny namanao miaraka amin'ny fihenam-bidy 33%.
Farany, raha amin'izao fotoana izao dia te hanandrana fotsiny ianao (safidy izay tiako foana), azonao atao ao amin'ny tranokala mpamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Hydra 4 dia manome mazava kokoa ny sarinao amin'ny Mac
Angela Ahrendts ao amin'ny Apple Store ao amin'ny foibe World Trade
Mety hahatratra ny fahitalavitra Apple an'ny taranaka fahefatra ny Twitter